Bekungathi wukhetho lwango-1994 beyogomela iCorona - Ilanga News
Home Izindaba Bekungathi wukhetho lwango-1994 beyogomela iCorona
Bekungathi wukhetho lwango-1994 beyogomela iCorona
Bathi umgomo ubanike ithemba lempilo njengoba lesi sifo sesibhubhise inqwaba
UNKK Zimbili Ngidi (76), uthe ukuja-bulele ukuthola ithuba lokugoma kanti uzimisele ngokuthi ngemuva kwamasonto amabili
aphindele futhi ukuyogoma
BEWUNGAFU-NGA ukuthi ku-miwe ulayini wo-kuyovota njengoba kwakwenzeka ngo-1994 ngesi-khathi abakuleli bevotela uhulumeni wokuqala wentando yeningi, esibhedlela iPrince Mshiyeni elo-kishini laseMlazi, lapho bekugo-nywa khona abantu abaneminyaka engaphezulu kuka-60 ubudala.
Laba abaneminyaka engaphezulu kuka-60, bebeme ujenga kodwa bebonakala nje ukuthi bakulangazelele ukuma lo layini omude abebekuwona ngoba benethemba lokuthi ekugcineni abakwenzayo kuzohlenga impilo yabo kwiCovid-19 edalwa yigciwane iCoronavirus.
Lapha bekuhlangene zonke izi-nhlanga futhi kubonakala nje ukuthi abantu kabazimisele ngokuha-mba bengagomile, kwazise seliphumile nezwi kuhulumeni lokuthi ihlandla lesithathu leCoronavirus seliqalile liyagadla.
ILANGA lihambele kulesi sibhe-dlela ngoLwesibili okuqalwe kuso-na ngoMsombuluko ukugonywa kwabantu asebekhulile. Abaningi abebekhona bathe banethemba lokuthi ngelinye ilanga bayovuka sekuthiwa kalisekho leli gciwane elimise kabi umhlaba wonke.
UNkk Babhekile Ndlovu (70) wasesigcemeni sakwa-N kuleli lo-kishi, uthe kumjabulise kakhulu ukuthola ithuba lokugoma.
“Uyazi nje bengithi uma ngizwa kukhulunywa ngale migomo, ngicabange ukuthi kuzogo-nywa abathile thina bantukazana nje siyozwa ngendaba. Ngibe se-ngilekelelwa ngabantwana bami abangibhaliselile.
“Kangikholwanga ngesikhathi indodakazi yami ingitshela ukuthi ngibiziwe ukuzogoma. Baningi abantu abadlule emhlabeni pha-mbi kwami, nami besekuthi noma ngiphethwe wumkhuhlane nginga-be ngisazi noma ngizovuka yini ngakusasa,” kusho uNkk Ndlovu.
Uthi kunomakhelwane bakhe abathathu abadlule emhlabeni ngenxa yalesi sifo ngasekuqaleni konyaka.
“Kanti khona kwakuwuhlobo luni lwesifo lesi esingasalapheki size sibulale abantu abaningi ka-ngaka uhulumeni engakwazi uku-sinqanda? Selokhu ngaba khona ngangingazitsheli ukuthi ngiyoke ngibone into enjengalena,” kusho uNkk Ndlovu.
UMnu Thulani Magagula (67) waseLamontville, uthi akakholwa-nga ngesikhathi omunye wabahle-ngikazi emtshela ukuthi makayogoma angabe esagoduka.
“Bengizozilandela amaphilisi ami amahlalakhona ngabe sengi-tshelwa ngomunye wabahlengikazi ukuthi abantu abaneminyaka engangeyami bayagoma. Ubuze ukuthi ngiyafuna yini ukugomela lesi sifo?
“Ngizitshele ukuthi uyadlala oku-the uma sengiqhamuka kunolayini omude wabantu abangangami be-yogoma ngabona ukuthi ubeqinisi-le ngempela ubengangikhohlisi,” kusho uMnu Magagula.
Uthi ubengeke nje angagomi ngoba yena uyakwesaba ukufa.
“Bekungabe ngiyaganga ukuthi sengithole ithuba elingandele bani kanje lokuthi ngigome bese-ngenqaba. Kangifuni nje ukuqa-mba amanga, bengingazitsheli ukuthi ngizogoma ngoba vele be-kuyinto engiyibonela kude nami. Kuse ngokunye sekuthiwa ngingagoma,” kusho uMnu Magagula.
UNkk Zimbili Ngidi (76) wa-KwaMakhutha uthi uzimisele ngo-kugqugquzela ngisho nomakhe-lwane bakhe ukuba babhalisele ukugoma ngoba ubone kukhona ngisho abelungu, bezobamba ula-yini.
“Uthi wawazi nje ukuthi singabamba ulayini omude kangaka na-bezinye izinhlanga kubalwa nabelungu ngoba sonke sifuna impilo? Ngibone isimanga mina, lesi sifo sivele sasenza salingana sonke, akekho ongcono kunomunye ngo-ba kasibheki bala lamuntu (lesi sifo), siyabulala nje.
“Ngenhlanhla nomusa kaJehova, akekho umuntu engisondelene naye oseke wathathwa yilesi sifo kodwa khona baningi abantu engi-baziyo nasendaweni asebathathwa yisona. Lesi sifo siyethusa ngoba ngisho ubuka izindaba bekumenyezelwa izikhulu ezishonile, sive-le simangale nje ukuthi siyophe-phelaphi? Siyingozi,” kusho uNkk Ngidi.
Uthe utshelwe ukuthi kumele aphinde abuye ngemuva kwamaso-nto amabili kanti uzimisele ngoku-thi afike atshele abazukulu bakhe ukuba bamkhumbuze.
“Futhi-ke nje kakubuhlungu nhlobo kanti kakuthathi nesikha-thi eside ukugoma. Nangemuva kwamasonto amabili ngizobuya nje ngeke ngilenze iphutha,” kusho uNkk Ngidi.
ILANGA likhulume nomunye wa-bahlengikazi obesaye ekhefini, obabaze ubuningi babantu.
“Namhlanje (ngoLwesibili) ba-ningi kakhulu kunayizolo (ngoMso-mbuluko) kanti bengingakulindele lokhu. Sigqugquzela abantu aba-dala ukuba bazivikele ngoba ukuthi sebegomile kakusho ukuthi se-bengenza noma yikanjani kumbe babe wuvanzi nje. Kumele baqhu-beke nokuzivalela, bangagcaluzi, behlise ukuhambela imicimbi nje-ngoba ihlandla lesithathu seliqalile ligadla nje,” kusho yena enqaba negama lakhe.
Omunye wonogada abasebenza kulesi sikhungo, uthe kumphatha kabi ukuthi usebenza ukulawula abantu abazogonywa lapha kodwa bona kabagonyiwe.
“Bekungeke nje kuqalwe ngathi ukuze nathi sizizwe siphephile? Kumele silawule abantu abazogoma okwenza kwathina sibone impilo yethu isengcupheni. Ngi-nethemba kodwa lokuthi bazosizwela bagcine besigomile,” kusho lo nogada.
UMnyango wezeMpilo unxusa abangakabhalisi ukubhalisa nje-ngoba kusavulelekile ngokusebe-nzisa i-internet htttps://vaccine.enro-ll.health.gov.za, noma bathumele umqhafazo ku-*134*832*ino-mbolo kamazisi no-# ekugcineni. Nakwi-Whats-App kule no-mbolo ethi:
060 012 3456 ubhale igama elithi REGISTER.
Previous articleUfikelwa yizinyembezi ngezinselelo zebhola
Next articleqale phansi indaba yokuqothwa kosomatekisi